Abadlali bebhola lase-Oceania- Izingane Zezindaba Zobuntwana Plus Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya I-OCEANIA FOOTBALL STORI
Abaqeqeshi bebhola abangochwepheshe abavela e-Australia, eNew Zealand nakwamanye amazwe ase-Oceania bonke baneZindaba Zobuntwana ezigcwele isikhathi esiningi esingasoze silibaleka esimnandi futhi sithinta inhliziyo. Umsebenzi we-LifeBoger ukutshela lezi zindaba kanye ne-Biography Amaqiniso e-Oceania Footballers.
Kungani Izindaba Zobuntwana Zase-Oceania Abadlali Bezinyawo?
Eminyakeni edlule, iqembu lethu libone igebe elikhulu lolwazi kuwebhu jikelele. Kuyinto eyodwa ephathelene nokuntuleka kokuqukethwe okwanele mayelana nezimpilo zokuqala ze-Oceania Footballers.
Ukuvala igebe leli, i-LifeBogger inqume ukuthi ibekhona, yingakho yenza lesi Sigaba se-Oceania. Lesi Sigaba sihlose ukuletha Izindaba Zobuntwana kanye ne-Biography Amaqiniso e-Oceania Footballers.
Mayelana nokuqukethwe kwethu kwebhola lase-Oceania
Njengoba kungenzeka ukuthi ubonile, zonke izindatshana zethu zigcina izihloko ezifanayo eduze nokugeleza okunengqondo kokuqukethwe. Amaphuzu alandelayo azokusiza uqonde okuqukethwe kwe-Oceania.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, sikulethela izindaba zobuntwana eziphawuleka zebhola lase-Oceania. Le ndaba iqala kusukela ngesikhathi sokuzalwa kwabo, ikwenza uqonde okuhlangenwe nakho kwabo kwempilo yokuqala.
Siphinde sikulethele imininingwane ngesizinda somndeni se-Oceania Footballers.
Okwesithathu, sikutshela imisebenzi yabo Yobudala Bokuqala kanye nesipiliyoni sebhola lika-Oceania, omunye wabenza babona ukubizwa kwabo kwebhola.
Indaba iyaqhubeka ngokwenzeka kweminyaka yabo yokuqala yokusebenza.
Okulandelayo Indaba Yethu Yomgwaqo. Lapha, sikutshela okwenziwe ngabadlali bebhola e-Oceania okwabenza babona ukuthi bazophumelela emisebenzini yabo.
Indaba yethu yeRise to Fame ibuye ichaze izindaba zeMpumelelo zabathandi bebhola e-Oceania, futhi, isimo sabo sodumo samanje.
Okulandelayo Indaba Yothando. Siyaqhubeka nokukuvuselela ngezintombi nabafazi be-Oceania Footballers.
Okulandelayo, amaqiniso maqondana nokuphila komuntu siqu kwe-Oceania Soccer Players.
AbakwaLifeBogger baqhubeka nokujwayelana namalungu emindeni yabo, nokuthi baxhumana kanjani namalungu omndeni nezihlobo.
Okulandelayo yi-Lifestyle Amaqiniso lapho sikutshela khona ukuthi i-Oceania Footballers iyisebenzisa kanjani imali yayo, iNetworth kanye neMholo.
Ekugcineni, sizokulethela ama-Untold Amaqiniso ongakaze wazi ukuthi akhona mayelana ne-Oceania Footballers.
Ngokufingqa, sikholwa ukuthi senze okudingakalayo, okungukuthi, ukuhlinzeka Isigaba esivimba izikhala mayelana ne-Oceania Footballers Izindaba Zobuntwaneni futhi Amaqiniso we-Biography. AbakwaLifeBogger bakholelwa ukuthi abalandeli bebhola kumele bakwazi ukufinyelela ezindabeni ezikhuluma ngabadlali ababasekelayo.
Ngenkathi silwela ukunemba nokungakhethi, Xhumana nathi uma ubona okuthile okungabukeki kulungile kunoma yikuphi kwendatshana yethu.
Bheka, uhlu lwethu lwezindaba ze-Oceania Football Players zombili ezisebenzayo futhi esethathe umhlalaphansi.
Abahleli be-LifeBogger - Usuku olushintshiwe: Septhemba 24, 2020